सर्वश्रेष्ठ 24 बर्ड टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ पुरुषहरु र महिलाहरुको लागि 24 बर्ड टैटू डिजाइन आइडिया
sonitattoo जुलाई 15, 2016
के तपाईंले कहिलेकाहीँ प्यारा पक्षी टैटूहरू देख्नुभयो? निस्सन्देह तिमीसँग छ। यो टैटू महिलाहरु हुन् जब यो महिलाहरु मा प्रयोग गरिन्छ र धेरै सुन्दर देख्न सकिन्छ।
बर्ड ट्याटटो अर्थ
पक्षीहरू निःशुल्क प्राणीहरूको रूपमा चिनिन्छन् जुन धेरै मानिसहरू यसको जाँच गर्दैछन्। यो जीवनमा धेरै चीजहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छ र यसकारण तपाई पुरुष र महिलाहरू यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केही मानिसहरू # ध्रुवता, स्वतन्त्रता, शान्ति, ज्ञान, ज्ञान, गहन बुद्धि, सुन्दरता, सुन्दरता, पारिवारिक, मातृत्व, आध्यात्मिक निर्देशन र धेरै अधिकसँग जोडिएको छैटौं सहभागिता।
बर्ड टैटूहरू सुन्दर र असाधारण डिजाइन र आकार हेर्न डिजाइन गरिएका छन्। यो मान्छे को एक #tattoo डिजाइन मा अधिक छ को कारणहरु मध्ये एक छ। त्यहाँ बर्डटोटका विभिन्न डिजाइनहरू छन् जुन विभिन्न अर्थहरू छन्। तपाईं एक पक्षी को प्रकार निर्णय गर्न को लागी एक हुनुहुन्छ जुन तपाईले आफ्नो शरीरमा स्याङ्किङ्ग गर्न आवश्यक छ। पक्षी आकार र आकृतिहरू आउँछन् र तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको बारेमा केही विशेष छ। मानिसहरू जो स्वतन्त्रता वा जीवनमा रहेका सामानहरूको अर्थमा जान चाहन्छन् यस विशेष ट्याटु डिजाइनको लागि जान सकिन्छ। बर्ड टटू शरीरको कुनै पनि भागमा स्याङ्किङ्ग गर्न सकिन्छ वा यसको अर्थ हराएको छ र यसले व्यक्तिको बारेमा धेरै कुरा बताउन सक्छ।
पक्षीहरू आकर्षक र सुन्दर प्राणी हुन जान्छन्। प्रत्येक पक्षी टटूमा एक प्रतीकात्मक अर्थ छ र अधिकांश मानिसहरू मानिस र देवताबीचको मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्छन्। छवि स्रोत
हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सोच्नु अघि हामी पक्षी टोटोटो को अर्थ बताउन सक्छौं। स्पाईरो टटू प्रयोग गरिनु र कमजोरीको प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। पवित्र बाइबलले यसलाई अकेलापन र एकाधिकारको प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरेको थियो। छवि स्रोत
यद्यपि, यदि यो जापानमा, यो ग्रीक मिथकहरूमा वफादारीको प्रतिनिधित्व गर्दछ, यो प्रजनन र देवी एफ्रोडाइटसँग सम्बन्धित छ। छवि स्रोत
यदि तपाईं निगल ट्याट्ट प्राप्त गर्न सोचिरहेका हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रजनन र नवीकरण जीवनबारे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अफ्रिकीमा भएकाहरूका लागि, निगलले शुद्धतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र चीनमा ती निगलहरू विवाहको आनन्दको रूपमा निगल देख्छन्। छवि स्रोत
तपाईंको लागि तेजस्वी बर्ड टैटू
एक लोकप्रिय पक्षी टैटू डुवोट टैटू हो जसले शुद्धता, कृपापन, शान्ति र आत्मा निर्दोष प्रतिनिधित्व गर्दछ। जब तपाईं दुई ढोकाहरू सँगसँगै छन्, तपाईं निष्ठा र वैवाहिक प्रेमबारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। स्वाण टैटूहरूको बारेमा? छवि स्रोत
स्वाम यूनानीमा पेश र विश्वास को प्रतिनिधित्व गर्दछ, यो देवी शुक्र को लागि खडा छ। जो लोग स्टर्क ट्याटोको लागि जान्छन्, जन्म र वसन्त प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ। छवि स्रोत
तोता प्रजनन र वसन्त को प्रतिनिधित्व गर्दछ र नकली को बारे मा लेता छ किनकी तोते को नकल गर्न को लागी जानिन्छ। यद्यपि, तोता हिन्दू धर्ममा बारम्बार बनाउने, भविष्यवाणी, प्रेम र कर्म संग सम्बद्ध मानिन्छ। छवि स्रोत
चीनमा, क्रेन राम्रो ओमान हुन सक्छ। कसैलाई उनीहरूले खुशी र प्रेम वा देवताका दूतहरूलाई बोलाएर बोलाए। छवि स्रोत
राम्रो #design को एक पक्षी टटू प्राप्त गर्नु भनेको तपाइँलाई पहिलो विचार गर्न आवश्यक छ। तपाईंले सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईंले टटूटिस्टलाई राख्नुभएको छ जो तपाईंको लागि रेखाचित्र गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। छवि स्रोत
रेखाचित्रको गुण भनेको दिनको अन्तमा कुरा हुनेछ। छवि स्रोत
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईले पास गर्नु भएको सन्देशको प्रकार हेर्नको लागि हो। छवि स्रोत
त्यसो गरिसकेपछि तपाईं टैटूस्टको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाइँ आफ्नो पक्षी टैटूहरूको लागि राम्रो टट्याटिस्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा, तपाइँ शरीरको त्यस भागमा तान्नु आवश्यक छ जुन तपाइँ आफ्नो पक्षीको टटूको लागि उत्तम मानिन्छ। तपाईं यी पक्षीहरूको विचार गर्नुहुन्छ? छवि स्रोत
पक्षीहरू सुन्दर प्राणीहरू हुन् जुन हामी उनीहरूलाई देख्न सक्छौं। हामी यी पक्षीहरू हाम्रो शरीरमा झुक्याउने मौका पाउँदैनौं तर हामीसँग हामीमा स्याहारको सुअवसर छ। पक्षी टैटू एक लोकप्रिय पक्षी टटू भएको छ जुन कसैले प्रयोग गर्न सक्दछ। छवि स्रोत
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चराहरू छन्; लुगा र जंगली चराहरू सबै प्रजाति र आकारको। प्रत्येक पक्षमा यसको महत्त्व छ जुन हामीले बिरुवाको टटूको प्रकारको सावधान रहनुको कारण हो जुन हामी प्रयोग गर्न जाँदैछौ। छवि स्रोत
उदाहरणका लागि लिनुहोस्, कुक वा रवेन ब्ल्याक जादू र डाइचकोप्टरसँग सम्बन्धित छ जब सेतो कवचहरू शान्ति र शुद्धता प्रतीक हुन जान्छन्। छवि स्रोत
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ कि पक्षी टटू डिजाइन आवश्यक भएको छ। तपाईंले आफ्नो छनौट गर्नु अघि पक्षीहरूको अनलाईन सूचीमा खोज्नु पर्छ। छवि स्रोत
पहिलो पल्ट तपाईंले गर्नु पर्छ एक टैटूवादी हो जसले तपाईंलाई बताउनेछ कि भोगमा के छ। तपाईंले छनौट गर्नुभएका विशेष पक्षीहरूका गुणहरूमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। छवि स्रोत
जब तपाईं यो ट्याटटोहरू जस्तो देख्नुहुन्छ भने, तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर यसलाई टाँस्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ र स्याङ्गका लागि के सोच्नु र एक्लो खडा र जनतामा शक्तिशाली बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ यस हातको लागि जान सक्नुहुन्छ कि बत्तीको टटूमा फूलहरू सँगसँगै छरिएका छन्। छवि स्रोत
फिस्टिस्टसले कसरी अर्को तहमा फैशन लिन पाउँदा जान्छ कि यो पक्षी टैटूमा आउँछ। तपाईं फरक बनाउन सक्नुहुन्छ जब तपाईं त्यो पुष्प डिजाइन संग बाहिर सार्न चाहनुहुन्छ जब तपाईंसँग एक ठूलो पुष्प पक्षी टटू छ। छवि स्रोत
जब तपाइँ यो टैटू देख्नुहुन्छ, तपाई तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यस टैटूको सुन्दरताले तिनीहरूलाई असाधारण उत्कृष्ट बनाउँछ। यदि तिमी पुरुष हो भने चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने तपाईंको शरीर यस प्रकारको डिजाइन स्वीकार गर्नेछ। छवि स्रोत
कसैले यो टैटूको प्रकारलाई देख्दैन र यसलाई माया गर्दैन। टैटूको रंगीन स्वभाव अद्भुत छ र जो मान्छे ड्राइंग गर्दै छन् मान्छेहरु को लागी राम्रो चीजहरु को लागी आँखाहरु हुन्। छवि स्रोत
तपाईं आफ्नो शरीर मा यो महान टैटू बनाउन मद्दत गर्न आफ्नो टटूटिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
जब तपाईं शब्दहरू र चराहरू सँगसँगै ट्याटूको रूपमा मिलाउनुहुन्छ, तपाईले यस प्रकारको महान कृति पाउनुहुनेछ। तपाईंलाई यो टैटू कस्तो छ? छवि स्रोत
थप बर्ड ट्याट डिजाइनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
आस्तीन टैटूहरूहेनना टैटूक्राउन टैटूहरूदूत टैटूअनन्तता टटूपुरुषहरूको लागि टैटूबिल्ली ट्याटोसूर्य टैटूहरूहात्ती टटूहात ट्याटोसकम्पास टैटूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूआदिवासी टैटूहरूसंगीत टैटूहरूछाती टैटूहरूटखने टैटूट्याटुहरू केटीहरूको लागिहीरे टैटूप्यार टैटूkoi fish tattooयुगल टैटूहरूहृदय टटटोतीर टटूरिप टैटूचेरी खिलौना टैटूप्यारा टैटूहरूकमल फूल टटूज्यामितीय ट्याटुहरूओटोपस ट्याटूक्रस टैटूटैटू विचारहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूगर्दन टैटूहरूतितली टैटूहरूबिस्कुट टटूसिंह टटटोहरूपक्षी टैटूहरूwatercolor टटूगुलाब टैटूहरूआँखा टटूएंकर टैटूहरूहात टाटाटोसबहिनी टैटूहरूफिर्ता ट्याटोहरूFeather Tattoomehndi डिजाइनपैट टैटूफूल टैटूहरूईगल ट्याटोचन्द्र टोटोटो